The Darkest Minds (2018) – Burmese Subtitle
PG-13 2018 104 min Action, Adventure, Drama
IMDB: 5.7/10 17,671 votes
မြို့တစ်မြို့မှာ ကလေးတွေ အကြောင်းရင်းမရှိ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသေဆုံးရာကနေ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စတင်ပါတယ်…ရောဂါရှာမရ ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းမသိ သေဆုံးသွားတဲ့ ကလေးအရေအတွက်ဟာများသထက်များလာပေမယ့် တစ်ဖက်မှာတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေလဲရှိနေပါသေးတယ်။
မိဘများရဲ့ ပူဆွေးသောကတွေကိုလျစ်လျူရှုပြီး အစိုးရကအာရုံစိုက်တာကတော့ ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်နဲ့ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပါပဲ။ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေမှာ စွမ်းရည်တွေရှိတယ်လို့ အစိုးရကသိပြီးတဲ့နောက် ကလေးတွေကို ကုသကာကွယ်ဆေးပေးခန်း အမည်ခံ အကျဉ်းစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပါတော့တယ်။ ဒီအကျဉ်းစခန်းကို အသက်၁၀နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲ အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးလေးနာမည်ကတော့ ရူဘီ ဒေလီပါပဲ။သူမတူရှားပါးလှတဲ့ စွမ်းရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အစွမ်းကြီးမားသူဆိုရင်သတ်ပစ်တဲ့အကျဉ်းစခန်းမှာ သူဘယ်လိုရုန်းကန်အသက်ရှင်မလဲ?အဲ့ဒီစခန်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် အောင်မြင်ပါ့မလား?အကျဉ်းစခန်းမှာလဲ ကလေးတွေချုပ်နှောင်ခံထားရပေမယ့်အပြင်လောကမှာရော ဘာတွေဖြစ်ပျက်ကုန်ပြီလဲ?
အသက်ငယ်ငယ်ရူဘီလေး ဒီအခက်အခဲတွေကို သူမရဲ့ သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ကျော်ဖြတ်လို့ရောအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာစိတ်ဝင်တစားဇာတ်လမ်းရဲ့အဟုန်မှာလိုက်ပါစီးမျောအဖြေရှာကြည့်ပါ။ဒီလို စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူငယ်လေးတွေတစ်ယောက်ဆီမှာကိုယ်ပိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်….အဲဒါတွေကတော့ အပြာရောင် အစိမ်းရောင် အ၀ါရောင်ဟာသာမာန်စွမ်းအားသာရှိကြပြီးတော့ အနီရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ကတော့ရှားပါးလွန်းတဲ့ စွမ်းအားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အန္တရာယ်အရှိဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ရူဘီလေးကတော့ လိမ္မော်ရောင်အစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒီကားဟာ X Men ကားနဲ့ဆင်တူပုံစံဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းအားရှင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိ မငြီးမငွေ့ကြည့်ရှုရမှာတော့အာမခံပါတယ်။သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းဆန်းဆန်းလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ အကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။
အညွှန်းကိုတော့ Century shwegu Facebook Page မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
File Size – 1.65 GB
Quality- BluRay 1080p 6CH
Running Time – 1hr 43min
Translator – Ko Oo
Encoder – K#/4nt_M1nn_K0
Ahmed Zakzouk Alannah Wilhite Allie McCulloch Amandla Stenberg Berglind Jonsdottir Bernard Bell Bradley Whitford Brennen Wiley Brooke Bowe Bruce Blackshear Bryce Speaker Carson Holmes Catherine Dyer Charles Green Cynne Simpson Darren Alford Deja Dee Desi-Ray Morris Devon Sorvari DeVyne Agapito Drew Scheid Ethan Alexander McGee Faye Foley Gino LaMont Golden Brooks Grace DeAmicis Gwendoline Christie Harris Dickinson Izabella Dzmitryieu John Crow Kaleigh Rivera Larkin Campbell Lidya Jewett Logan Siu Makenzie Collier Mandy Moore Mark O'Brien McCarrie McCausland Miya Cech Morgan Gao Patrick Gibson Peyton Wich Sammi Rotibi Shannon Mosley Skylan Brooks Skyler Semien Wade Williams Wallace Langham
Option 1 Drive.google.com 1.65 GB 1080p
Option2Megaup.net 1.65 GB 1080p
Option3Mega.nz 1.65 GB 1080p
Option4Onedrive.live.com 1.65 GB 1080p
Option5Mshare.io 1.65 GB 1080p
Option6Usersdrive.com 1.65 GB 1080p
Jurassic Park III (2001) 2001
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2010) 2010
Déjà Vu (2006) 2006
Johnny English Reborn (2011) 2011
Rambo (2008) 2008
Death Race2(2010) 2010